လက်ထပ်ရမှာကိုသေလောက်အောင်ကြောက်ကြတဲ့ ရာသီဖွားများ - KSM Global
သူများတွေ လက်ထပ်ပွဲတွေပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွှဲနေချိန်မှာ ရည်းစားတစ်ယောက်ထားဖို့ကိုတောင် ဝန်လေးနေတတ်တဲ့ ချစ်ရမှာကြောက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တချို့ကျတော့ လက်ထပ်ရမှာ၊ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ မလွတ်လပ်တော့မှာကို တွေးပူပြီး လက်ထပ်ရမှာကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ လက်ထပ်ရမှာကို စိတ်ကူးထဲမှာတောင် တွေးလို့မရလောက်အောင် ကြောက်ကြသူတွေကတော့ သူတို့လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Leo ( July 22 – Aug 22)
သိဟ်ရာသီဖွားတွေက လက်ထပ်ဖို့ကို အကြောင်းမဲ့ကြောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ ချစ်သူအပေါ်ဂရုစိုက်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ စစချင်းချစ်သူဖြစ်စအချိန်တွေမှာ အိပ်ရာထတဲ့အချိန်ကနေ၊ ညအိပ်တဲ့အချိန်ထိ ချစ်သူဆီပဲစိတ်ရောက်နေတဲ့အထိ အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်ဖက်လူရဲ့ အပြုအမူတချို့ကိုသည်းမခံနိုင်တော့တာမျိုး၊ သူတို့ကိုစိတ်ပျက်အောင်လုပ်နေတယ်လို့မြင်လာတာမျိုး၊ သူတို့ကပဲ တစ်ဖက်သတ်ပေးဆပ်ချစ်နေရတယ်လို့ ထင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ တစ်ဖက်လူကိုစိတ်ပျက်လာပြီး၊ အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပျက်လာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မနှစ်မြို့သလိုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူဘဝမှာတောင် ဒီလိုဖြစ်နေရင် ၊ လက်ထပ်ပြီးလို့ ဒီလိုဖြစ်ရင် ဒုက္ခပဲဆိုပြီး သူတို့ကိုယ်သူတို့ စိတ်မချလို့ လက်ထပ်ဖို့ကြောက်နေကြတာပါ။
2. Sagittarius ( Nov 22 – Dec 20)
ဓနုရာသီဖွားတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်တဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပြီး ဘဝကို အရမ်းလေးလေးနက်နက်ပုံစံမျိုးနဲ့မဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာက ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့် အေးရာအေးကြောင်းလေးပဲနေချင်တဲ့ ဓနုလေးတွေအတွက် မစဉ်းစားချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့။ လွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်လွန်းတဲ့ ဓနုရာသီဖွားတွေအတွက် လက်ထပ်ခြင်းက ထောင်ချောက်တစ်ခုလိုခံစားရစေပါတယ်။ သူတို့ကို အရမ်းအလိုလိုက်ပြီးချစ်တဲ့သူမျိုးနဲ့တွေ့မှ လက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားကြမယ့်သူလေးတွေပါ။
3. Aquarius ( Jan 20 – Feb 18)
ကုမ်ရာသီဖွားတွေကတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုကြိုက်တယ်၊ တစ်ယောက်တည်းလည်းပြီးပြည့်စုံတယ်၊သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးက အေးချမ်းတယ်လို့ ခံယူထားတဲ့သူလေးတွေပါ။လက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါ အဲ့ဒီလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝလေးကို အနှောက်အယှက်တွေဝင်လာမယ်လို့ ထင်နေပြီး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တွေးကိုမတွေးကြတာပါ။ တစ်ယောက်တည်းလည်းသာယာနေတဲ့ဘဝကို ပျက်စီးမခံနိုင်တဲ့ ကုမ်လေးတွေပေါ့။